2 mooshin oo dalbaya in xilalka laga qaado M/weyne Riyaale & Afhayeen Cirro oo la hor geeyey baarlamaanka Somaliland. – Radio Daljir
Hargeysa, Sept 22 – Mudanayaasha baarlamaanka Somaliland ayaa fadhiga aan caadiga ahayn ee u socda ku ansixiyey 2 qodob oo horyaal mudanayaasha golaha. 2-da mooshin ee is-feer socda ayaa dalbaya in xilalka laga qaado M/weyne Riyaale, ku xigeenkiisa iyo afhayeenka barlamaanka Md. Cirro.
Mooshinka 1-aad ee xilka qaadista M/weyne Riyaale ayaa loo cuskaday dhawr qodob oo nuxurkoodu yahay in uu baal maray sharciga, jabiyeyna qoodbo ka mid ah dastuurka.
M/weyne Riyaale ayaa lagu eedeeyey:
– Ku tumasho dastoor,
– Daabacasho lacago aan baarlamaanka laga ansixin,
– Dhisme hay?ado aan sharci ahayn, baarlamaankana aan laga ansixin,
– Is-hortaagid furlinta xeerar ka soo fulay baarlamaanka, lagana xusi karo xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha,
– Xisaab xir la’aan, iyo miisaaniyad aan baarlamaanka laga ansixin.
Mooshinka 2-aad ee xil ka qaadista afhayeenka baarlamaanka ayaa isna doodiisu ay bilaaban doontaa berri.
Waxaa in dhawaale loolan siyaasadeed oo ba’ani uu ka dhex socday axsaabta siyaasadeed ee Somaliland.
Mudanayaasha axsaabta mucaaradka ah ee Kulmiye & Ucid ayaa ku adkaysanaya in xilka laga qaado M/weyne Riyaale iyo ku xigeenkiisa, halka mudanayaasha xisibiga talada haya ee Udub ay iyana danaynayaan in xilka laga qaado afhayeenka baarlamaanka Md. C/raxmaan M. Cirro.
Sidoo kale golaha guurtida ee Somaliland ayaa iyana ka dooday muranka siyaasadeed ee ka dhex aloosan axsaabta siyaasadeed ee Somaliland.
Golaha guurtida ayaa ka fiirsanaya talo hore loo soo jeediyey oo dhigaysay in xilka mar 3-aad loo kordhiyo xukuumada M/weyne Riyaale. Qaar ka mid ah mudanayaasha golaha guurtida ayaa qaba fikir kaa duwan oo dalbaya in aan xil kordhin dambe la samayn.
Fadhiga golaha wakiilada ayaa maanta waxaa ka soo xaadiray 42 mudane.